Nazi iikhosi zasekhompyutheni zasimahla ezikwi-intanethi ezinezatifikethi ezinokukunceda ukuba uqalise ubuchule bedijithali okanye uphucule isakhono esele sikhona. Ufumana isatifikethi samazwe aphesheya esiqinisekisa ukuba uthathe inxaxheba kwezi zifundo ezinokukunceda utsale abathengi abaninzi ukuba ungumntu osebenza yedwa okanye uqala ithuba elingcono lokufumana umsebenzi ohlawula kakuhle ngesakhono sakho.
Ufuna ukuba nobuchule ekusebenziseni iikhompyuter okanye indawo yokufunda enzulu ukuhambisa iinkonzo nemisebenzi kodwa ungazi ukuba ungaqala ngaphi kuba awazi ukuba ungazifumana phi na izixhobo eziluncedo? Nazi iikhosi zekhompyuter eziza kukunceda.
Ayisenawo umba, konke enkosi kwi-intanethi.
Ungazithatha iiklasi zekhompyuter zasimahla kwi-intanethi ngexesha lakho kunye nokulungiselela, yonke into oyifunayo yikhompyuter kunye nonxibelelwano lwe-intanethi. Ewe ewe, ungafaka iglasi yewayini okanye ikomityi yekofu kolo luhlu.
Ukufundwa kwi-Intanethi kuye kwaba yinto eqhelekileyo kule minyaka imbalwa idlulileyo kwaye nabani na unokuthatha isigqibo sokuthatha ikhosi ekwi-intanethi yokuphucula izakhono zabo, aqale ikhondo elitsha lomsebenzi okanye afumane ukunyuselwa kwiofisi yakhe, nokuba yeyiphi na indlela, ikunika umvuzo ongaphezulu, wena yiba yingcali ngakumbi kwaye uye unyuka ileli yokufunda.
Sinoluhlu lwezikhokelo zasimahla kwizifundo ezikwi-Intanethi. Ezi zikhokelo zinqumle iikhosi ezothusayo ezikwi-Intanethi onokuthi uzithathe simahla kunye nezifuna iintlawulo nazo.
Sibonelele ngezikhokelo zabafundi abafuna ukufumana isidanga esikwi-Intanethi kwiiyunivesithi zamanye amazwe kwaye sidwelise ngokweenkcukacha inani le kwiiyunivesithi ezikwi-Intanethi e-Australia kubafundi bamazwe ngamazwe nabasekhaya.
ECanada, baninzi iikhosi ezikwi-Intanethi onokuthi uzithathe simahla kwaye kukho inani le iiyunivesithi ezikwi-Intanethi unokufaka isicelo sokwamkelwa ngokupheleleyo simahla.
Ezi zikhokelo zokufunda kwi-Intanethi njengolu khokelo lwethu kwizifundo zasimahla zasekhompyutheni ezinezatifikethi ziindlela zokunceda abafundi ukuba bafumane ukufikelela kwizixhobo zokufunda kunye namathuba okwandisa ubungakanani bemfundo ngelixa belungiselela 'intengiso yemali'.
Ukongeza kuluhlu, kuya kufuneka wazi ukuba kukho uluhlu lwee iikhosi zokuqinisekisa kwi-Intanethi ukuba ungabhalisela kwanamhlanje.
Eli lixesha lobuchwephesha kunye nokufumana isakhono esisekwe kwikhompyuter lolunye lolona khetho lubalaseleyo ebomini oya kuthi ulwenze njengoko ezi zakhono zifunwa phantse kuyo yonke inkampani ephaya, nokuba inkulu okanye incinci kwaye ukuba uyingcali kwintoni uyakwenza, iinkampani ezinkulu zobuchwephesha ziya kuza emva kwakho kwaye ewe, ngentlawulo elungileyo!
Uthungelwano lwekhompyuter lubanzi ngokwenene kodwa zonke iinxalenye zalo zibalulekile kwaye zinokufundwa. Ngale nqaku, unokukhetha abo unqwenela ukufundisisa (unokufunda ngaphezulu kwesinye). Size malunga nezifundo zasimahla zekhompyuter ezikwi-intanethi onokuthi uthathe inxaxheba kuzo.
Awuyi kuhlawula ngokuthatha nayiphi na iikhosi, kwaye uya kunikwa isatifikethi emva kokugqitywa ukubonisa ukuba unesakhono kulo mbandela.
Izifundo zasimahla ezikwi-Intanethi zekhompyuter ezinesiqinisekiso
INTSHAYELELO KWISAYENSI YEKHOMPYUTHA
UKWAKHIWA KWEENKCUKACHA NEENKCUKACHA
UPHUHLISO LWESICELO SEWEBHU
UYILO LWE-WEBHU LUSETYENZISWA
INTSHAYELELO NGOKUSETYENZISWA KWAMAXABISO OKUFUNDA
YIBA NGUMQHUMANISI WE-ANDROID
Isiphelo ekufumaneni iikhosi zasimahla zekhompyuter ezikwi-intanethi ezinezatifikethi
Intshayelelo kwiNzululwazi yeKhompyutha -Khosi yeKhompyuter yeKhompyuter
Uhlalutyo lukaGoogle-Ikhosi yeKhompyuter ekwi-Intanethi
Ukufunda ngomatshini-Ikhosi yeKhompyuter ekwi-Intanethi
Ukwenza iikhowudi kubaYili-Ikhosi yeKhompyuter ekwi-Intanethi
Ukufunda okunzulu-Ikhosi yeKhompyuter yeKhompyuter
Ulwakhiwo lweDatha kunye neeAlgorithms-Ikhosi yeKhompyuter yeKhompyuter
Ukuphuhliswa kwesicelo seWebhu- ikhosi yeKhompyuter ekhompyuter
Intshayelelo kwi-Cloud Computing-Ikhosi yeKhompyuter ekwi-Intanethi
IziSeko zoYilo lweWebhu-Ikhosi yeKhompyuter ekwi-Intanethi
UkuThengiswa kweDijithali- Ikhosi yeKhompyuter yeKhompyuter
Ubukrelekrele bobugcisa- Ikhosi yeKhompyuter yeKhompyuter
Yiba ngumPhuhlisi we-Android-Ikhosi yeKhompyuter ekwi-Intanethi
IAdwords zikaGoogle-Ikhosi yeKhompyuter ekwi-Intanethi
Le khosi yasimahla ekhompyutheni ekhompyutheni iyimfuneko kubaqalayo ukuba bathathe okanye abantu abanolwazi lwenkqubo zero, ikhosi iya kukukhanyisela kwikhompyuter esisiseko kunye nomqondo wekhompyuter.
Emva kokugqitywa, uya kufumana ulwazi kuphuhliso lwesoftware, inkqubo ejolise kwinto, izinto ezisisiseko zeJava kunye neendlela ezichazwe ngumsebenzisi.
Ikhosi ubude bexesha: iiyure ezingama-52
Le khosi esekwe kwikhompyuter enikezelwa nguGoogle kuye nakubani na onqwenela ukuba nezakhono kuGoogle Analytics, uya kuyazi indlela yokusebenzisa ikhowudi yokulandela umkhondo, ukuseta izihluzi zedatha, ukwenza nokulawula iakhawunti.
Emva kokugqitywa, izakhono zakho zinokusetyenziswa kumashishini ahlukeneyo anjengeendawo zenkxaso, ukupapashwa kwi-Intanethi, kunye nokukhokelela kwiindawo zokuvelisa.
Ixesha lesifundo: Iiyure ezi-4-6
Ukufunda ngomatshini lisebe le yesayensi yolwazi oko kubandakanya ukwenza iikhompyuter zisebenze ngaphandle kokucwangciswa.
Le khosi iya kukubhengeza ukuba ubazi ubuchule bokufunda ngomatshini kunye nokuphunyezwa okusebenzayo ukuze ubenze bakusebenzele okanye ubasebenzise ukusombulula iingxaki.
Ikhosi ubude bexesha: iiyure ezingama-56
Le khosi iya kukufundisa njengomyili ukudibanisa inkqubo kunye noyilo ukuze ube nakho ukwenza kwaye uyile iwebhusayithi ngokupheleleyo.
Ikhosi ubude bexesha: iiyure ezingama-60
Le khosi yasimahla ekhompyutheni ekwi-intanethi iseti esezantsi yokufunda komatshini apho iinethiwekhi ezingezizo ezomntu kunye neendlela eziphefumlelwe yingqondo yomntu zifunda kwixabiso elikhulu ledatha kodwa inesatifikethi sayo esahlukileyo xa sigqityiwe.
Emva kokugqitywa kwale khosi, uya kufumana ulwazi ngendlela yokuphumeza ukufunda okunzulu koomatshini ukusombulula iingxaki ezinzima.
Le khosi iya kukuxhobisa ngeendlela ezifanelekileyo zokusombulula imiba eyahlukeneyo yekhompyuter kunye nokuzilungiselela ngokwakho ukuya kuthi ga kwiingxaki ezili-100 zokufaka iikhowudi kuyo nayiphi na inkqubo oyikhethayo.
Emva kokugqitywa, izakhono zakho zinokusetyenziselwa amayeza kwaye zifunwe ziinkampani ezinkulu zeetekhnoloji.
Ixesha lesifundo: iiyure eziyi-8 ngeveki iinyanga ezintathu
Ikhosi iya kukufundisa indlela yokwenza iiwebhu kunye nokusetyenziswa kwedatha kwi-PHP ngokusebenzisa i-SQL kuphuhliso lwedatha kunye nokusebenza kwiJSON, jQuery, nakwiJavaSript.
Ixesha lesifundo: iiyure eziyi-11 ngeveki iinyanga ezintathu
Le yikhosi yokwazisa kuyilo lwewebhu kwaye uya kufunda ukuyila iwebhusayithi. Unokwazi ukuyila iiwebhusayithi ngemizobo esemgangathweni, oopopayi, ukubonelela ngemixholo njl.
Ngaphambi kokuba uqale le khosi kubalulekile ukuba ube nokuqonda okusisiseko kwe-IT. Ikhompyuter yelifu kukugcina kunye nokufikelela kwedatha kunye neenkqubo kwi-intanethi endaweni yehard drive yekhompyuter yakho.
Le khosi iluncedo kwintengiso kunye nasekwenzeni izicelo.
Ixesha lesifundo: Imizuzu engama-56 yevidiyo efunekayo
Oku kukusetyenziswa kwekhompyuter okanye ezinye izixhobo zedijithali ukukhuthaza imveliso yakho okanye iinkonzo kwi-intanethi. Uya kufunda ukuyila nokuphuhlisa umxholo osemgangathweni onokuthi ubhenele kubathengi bakho nakubathengi.
Ikhosi ubude bexesha: iiyure ezingama-40
Le khosi iya kukufundisa indlela yokufaka i-AI, wazi ukuba isebenza njani kwaye uyiphumeze njani ukusombulula imiba yokwenyani kumbutho wakho.
Ixesha lesifundo: Iiveki ezi-4, iiyure ezingama-2-3
Le khosi iya kukukhokelela ekubeni ube ngumphuhlisi we-Android nangona ungenaso isakhono senkqubo, unganakho ukuphuhlisa ii -apps ze-Android ukusuka ekuqaleni emva kokugqitywa kwezifundo kwaye uthathe isigqibo sokusebenzela iinkampani okanye ukuqala ishishini lakho ekubeni ngumphuhlisi we-Android.
Ixesha lesifundo: I-12hr yevidiyo efunekayo
Oku kuya kukufundisa ukuba ungazisebenzisa njani iintengiso zikaGoogle ukubhengeza iimveliso kunye neenkonzo zakho okanye kwenye inkampani kwi-intanethi.
Uya kuxhotyiswa ngezakhono ekudaleni nasekuyileni umxholo weentengiso zikaGoogle oza kutsala abantu kwaye uvelise iziphumo ezifanelekileyo.
Ixesha lesifundo: Iiyure ezingama-54
Ukufunda enye okanye ezingaphezulu kwezi zifundo zidweliswe apha ngasentla kwiikhompyuter ziya kunceda ukukhulisa ulwazi lwakho kwizakhono ezisekwe kwikhompyuter (zedijithali). Awusayi kuphinda ube yi-newbie okanye umqali emva kokuba ugqibe ngempumelelo ikhosi yakho yobuchule bekhompyuter.
Njengomphathi wesatifikethi kwezi zifundo zekhompyuter, uya esiba nobungcali ngakumbi, kungekuphela nje ngeziqinisekiso kodwa nangolwazi lokwenyani.
Ukuba ungusomashishini ohamba yedwa kunye neshishini lakho elakhelwe macala onke ezi zakhono zedijithali, ngokuqinisekileyo uya kwenza imali ngakumbi xa uhambisa imisebenzi ebhetele.
Iikhosi ze-100 + zasimahla ezikwi-Intanethi eCanada
Iikhosi zasimahla zoLawulo lwe-Intanethi zaBafundi
Iiyunivesithi ezikwi-Intanethi ezineNtlawulo yokuSimahla
izifundo zekhompyuthaizifundo zedijithaliIzifundo zasimahla ezikwi-Intanethi zekhompyuter ezinesiqinisekisoizifundo zekhompyuterizifundo zedijithali ezikwi-intanethi
Post Previous:Iikhosi ezili-16 zeSifundo seMpilo seNgqondo eziSimahla kwi-Intanethi
Okulandelayo Post:IYunivesithi yaseWesterns Iimfuno | Imirhumo, iiNkqubo, iScholarship, iZikhundla
UNikita daulat baravkar uthi:
April 20, 2022 kwi 4: 10 am
SHIVAM DUBEY uthi:
Epreli 11, 2022 kwi-1: 59 pm
NDIFUNDE IKHOSI YEKHOMPUTHA KWI-INTANETHI YAMAHHALA
Epreli 1, 2022 kwi-2: 56 pm
Matshi 9, 2022 kwi-5: 25 pm
Ndinomdla wokufunda izakhono ezisisiseko zekhompyuter.
UGqirha SINACHIKUPO uthi:
Matshi 5, 2022 kwi-3: 22 pm
ndinomdla wokufunda isayensi yekhompyuter
April 28, 2022 kwi 10: 26 am
Iqela leemveliso zelizwe
January 10, 2022 apha 4: 55 pm
Ci sono molte ithuba di apprendimento gratuito ora, ed è fantastico. Vado a scuola, ma voglio imparare “dieci dita”. Ho trovato dei corsi su Ratatype.it, ho frequentato dei corsi e ho ricevuto un certificato gratis. E poi penso di studiare informatica
January 11, 2022 apha 12: 08 pm
Ngaba ufuna isatifikethi esiqinisekisiweyo?
Pingback: Iikhosi ze-15 zeYale zasimahla kwi-Intanethi zaBafundi kunye nabaSebenzi
Pingback: Uluhlu lweeNyuvesi eziSimahla kwi-Intanethi zaBafundi beZizwe ngeZizwe ngo-2021
Pingback: I-9 yeeDigri eziPhezulu zeNkonzo eziSimahla kwi-Intanethi kunye neeDigri zeSemina 2021
Ajay Raju Ingale uthi:
Oktobha 26, 2021 kwi-4: 04 am
ndifuna ukujoyina ezi zifundo
UBrian ojok uthi:
NgoSeptemba 3, 2021 kwi-8: 10 pm
Ndinomdla kuyilo lwewebhu olusisiseko kunye nophuhliso lweSicelo sewebhu
Septemba 12, 2021 kwi 1: 57 am
Cofa nje kwikhonkco lesicelo elibonelelweyo kumbhalo onemibala.
UAjeet kumar singh uthi:
Septemba 3, 2021 kwi 8: 20 am
isatifikethi sokukhawuleza, imizuzu emi-2
UGAADI JOHN TERKUMA uthi:
Juni 9, 2021 kwi-8: 11 pm
Ndinomdla wokufaka isicelo?
Juni 9, 2021 kwi-10: 06 pm
Unxibelelwano lwesicelo lwenziwe ukuba lufumaneke apha ngasentla.
Juni 9, 2021 kwi-11: 48
Umxholo wakho ulungile ndiyayixabisa
UHelen J. Rosario uthi:
February 15, 2021 kwi 1: 53 pm
Oku kuluncedo kakhulu enkosi!
IKamalpreet Kaur uthi:
Novemba 7, 2020 kwi-4: 38
Molo ungandixelela ukuba ndingasifaka njani isicelo sale khosi
Novemba 7, 2020 kwi-10: 08 pm
Cofa nje kwikhonkco lesicelo kwikhosi oyithandayo
Novemba 5, 2020 kwi-8: 17
Ngaba ndinomdla wokufunda ikhosi yokuqala, ndisebenzisa njani?
Novemba 8, 2020 kwi-8: 56
Ikhonkco lesicelo lilapho. Cofa kuyo ukuze uqhubeke.
UFestus Asuen uthi:
February 20, 2021 kwi 4: 11 am
IVICKRAMAN A uthi:
Septemba 8, 2020 kwi 11: 08 am
Ndinomdla kule khosi
Harshdeep singh uthi:
Oktobha 23, 2021 kwi-5: 41 am